Mila manatsara ny adiny amin’ny fanodikondinam-bola ny fitsarana Soisa – i am a malagasy in genève
22 mai 2007 22 mai 2007
Mila manatsara ny adiny amin’ny fanodikondinam-bola ny fitsarana Soisa
© Chappatte tamin’ny « Le Temps » [Genève] 22 May 2007 www.globecartoon.com/dessin
Na dia mihevitra aza ny fitondrana Malagasy fa izy no tena voa mafy amin’ity raharaha fanodikondinam-bola ity dia mba kivy koa ny fanjakana Soisa ary mahatsiaro ho lany andro ireo mpikaroka ara-pitsarana isan’ambaratongany aty Soisa. Aoka hazava avy hatrany ny teniko raha miresaka fanatsarana, tena isan’ny avo lenta ny lalàna mifehy ny serasera ara-bola eto Soisa sy ireo fitaovam-pikarohana mifanaraka amin’ny teotr’andro. Ny olana dia ireo firenena izay iarahan’ny firenena Soisa miasa, toa an’i Madagasikara ohatra, na i Haïti, na i Kôngô demokratika.
Niniako notanisaina ireo firenena telo ireo satria samy votsotra amin’ny raharaha famehezam-bola mitentina,
-2.8 millions CHF hoan’ny Malagasy fa naverina tamin’i Tantely Andrianarivo araka ny fanambaran’i Benoît Girardin, « chargé d’affaires »-n’ny masoivoho Soisa aty Madagasikara,
– 7,6 millions CHF ny an’i Haïti satria haverina amin’ny havan’i Jean-Claude Duvalier [Baby doc] rehefa afaka andro vitsivitsy,
– 10 millions de CHF ny an’i Kôngô demokratika atahorana hizohy ny làlana mamonjy ny taranak’i Mobutu.
Ireo raharaha telo ireo dia mitovy hatrany ny anton’ny famotsorana « ny tsy fahampian’ny porofo hentitra ».
Tsy misy tetika ambadika fanakorotanana avy aty Soisa izany aloha ny momba iny raharaha iny raha tsy hoe tian’i Soisa aongana avokoa ny mpitondran’i Haïti sy i Kôngô. Ny tena marina dia efa nanao herim-po betsaka ny fanjakana Soisa amin’ny raharaha toy itony anefa very maina ny fikarohana amam-taonany maro … nohon’ireo fahefam- pitsarana amin’ny firenena iaraha-miasa izay tsy ampy fahamatorana toy ny fitsarana Malagasy ohatra.
Anatrehan’ireo faharesen’ny fitsarana Soisa mifanesy ireo dia novelabelarin’i Paul Seger, izay sady Ambasadaoro Soisa no olon-dalàna « Directeur de la Division du Droit international public » amin’ny ministeran’ny raharaham- bahiny Soisa [Département Fédéral des Affaires Etrangères, DFAE], teo anatrehan’ny mpanao gazetin’ny « Club suisse de la Presse », ireo tsoak’heviny manokana mikasika ireo raharaha fanodikodinam-bolam-panjakana ireo [Genève tamin’ny Talata 15 May 2007]. « Ny Famerenana ireo vola na-alokalok’ireo mpitondra fanjakana vahiny aty Soisa: aiza ho aiza isika izao ? » izany no lohatenin’ny famelabelarana [Restitution des fonds des potentats déposés en Suisse: où en est-on ?].
Nambaran’i Paul Seger tamin’ny alalan’ny ohatra ireo ezaka vitan’ny fanjakana Soisa. Mahatratra 2 milliards CHF tokoa mantsy ny vola efa naverina vokatry ny adin’ny Soisa amin’ny fanodikondinam-bola. Izany hoy izy, dia maneho ny halavorarin’ny fiaraha-miasa mipetraka eo amin’ireo banky eto an-toerana sy ny fanjakana foibe Soisa. Mampalahelo anefa fa tsindraindray dia tsy tafaverina any amin’ireo firenena mahantra izay tena mila azy ireny vola ireny, nohon’ny fikatsohan’ny fanadihadiana.
« Tsy mba kely làlana ny ratsy » hoy ny Ntaolo. Ny fikarohana ny marina anefa mila manaraka izay fepetra hentitra indrindra. Ao ny fetra ara-paritany sy ny fiandrianam-pirenena [ny lalàna Malagasy ihany no mihatra any Madagasikara]. Manarak’izay dia misy koa ny fefy ara-potoana [tsy azo heverina ho diso raha tsy mbola mipetraka akory izay lalàna mandrara ilay hetsika].
Ohatra iray tonga ato an-tsaiko no hotantaraiko anareo, ireo mpiambina « gardes-frontières » avy eto Genève sy Frantsa manodidina dia voatery niandry ny fanovan-dalàna vao afaka nanohy ny fanenjehana ireo jiolahy tra-tehaka [flagrant délit] raha miampita firenena ireny. Taloha mantsy dia vao tafiditra amin’ny firenena hafa ireo jiolahy dia voatery mijanona ireto mpanenjika. Vokatr’io fiaraha-miasa io dia noforonina koa taty aoriana, ny fiaraha-miambina na « patrouilles communes » izay iarahan’ny mpitandro filaminana Genevois sy Frantsay mandray anjara. Raha aty Soisa no tratra ny mpangalatra dia ny mpitandro filaminana Soisa no miditra an-tsehatra ary raha any Frantsa kosa dia manampy fotsiny ilay Soisa. Amin’izay ara-dalàna hatrany ny raharaha fa tsy votsotra ho azy rehefa tonga eny amin’ny fitsarana noho izay hetsika mety tsy ho ara-dalàna mety nataon’ny mpisambotra.
Andao isika hiverina amin’ireo resaka « volabe », satria tany Madagasikara [Haïti na Kôngô] no notanterahina ilay hetsika izay ifotoran’ny fitsarana dia anjaran’ny fitsarana Malagasy ny manaporofo ny maha-« tsy ara-dalàna » ilay hetsika tamin’izay fotoana nanantanterahana azy. Tsy mba toa an’i Soisa avokoa anefa, satria maro ireo firenena izay mbola tsy ampy lalàna sy fitaovana amin’ny fikatsahana sy fanenjehana ireny fanodikodinam-bola ireny. Indraindray aza moa dia dia tsy misy taratsy na porofo tsotra izao.
Miaiky ny lesoka misy amin’ny rohi-pitsarana ankehitriny ny olon-dalàna Paul Seger, ka raha namarana ny famelabelarany izy dia nanolotra toro-hevitra mba hanatsarana ny eto Soisa. Tokony omena fahefana ny hanapaka ny governemanta Soisa raha toa ka mikatso ny fanadihadiana nohon’ny fahalemen’ ny fitsarana any amin’ny firenena nisian’ilay hetsika « le Conseil fédéral (ndlr gouvernement suisse) devrait pouvoir confisquer puis rendre les fonds aux Etats lésés si leur système judiciaire ne fonctionne plus » [Paul Seger, lecourrier.ch – 16.05.2007].
« Tsy misy tsy diso izay mandia ny tany fa izay mivari-lavo no adala indrindra. » Mazava ho azy fa tsy maintsy mialoha- làlana [sa lalàna ?] hatrany ny heloka sy ny haratsiana fa anjaran’ny mpiandraikitra ny tsy hamela azy ireny amin’izao amin’ny fampivoarana hatrany ny lalàna 😉 Tsahiviko eto am-pamaranana fa araka ny fanambaran’i Andriamparany Radavidson, ministra Malagasy momba ny toe-bola, dia mikasa ny hamorona « birao fikarohana momba ny seraseram-bola » ny fanjakana Malagasy [service de renseignement financier, lexpressmada.com – 03.05.2007].
Tsy fantatro raha vokatry ny fahatsapan’ny mpitondra ankehitriny fa mila manatsara koa ny adiny amin’ny fanodikondinam-bola koa ny fitsarana Malagasy, fa ny hany faniriako dia ny tsy hiletehan’izany tetik’asa izany any ambany laharana any.
[Votsotra ve ireo 2,8 millions CHF an’i Tantely Andrianarivo taty Soisa ? >>]
[Point de vue suisse à propos du déblocage des 2.8 millions CHF de Tantely Andrianarivo >>]
[«Baby Doc» va récupérer ses millions planqués en Suisse – lecourrier.ch>>]
[Le Club suisse de la Presse – pressclub.ch >>]
Posté dans tsetsatsetsapar tomavana4 commentaires
4 réflexions sur “Mila manatsara ny adiny amin’ny fanodikondinam-bola ny fitsarana Soisa”
24 mai 2007 à 15:39
Eto dia tena resaka lalàna mihitsy no manahirana. Ny lalàna amin’ny tany an-dalam-pandrosoana matetika dia ny teo amin’ny nahazoany fahaleovantenany ihany no nisisan’ny fiovana farany.
Ireo raharaha hitantsika ohatra telo ireo dia resaka fanodinam-bola avy amin’ny mpitondra tao amin’ireo firenena ireo. Izy mpitondra (amin’ny tany andalampandrosoana) dia tsy hametraka lalàna hamely azy velively izy.
I Soisa anefa firenena mivoatra be eo amin’ny fanaovan-dalàna. Noho izany tsy ny fitsarana any amin’ireo firenena notononinao ireo mihitsy no tsy matotra fa ny lalàna mipetraka no efa ataon’ny mpitondra amin’izay hiarovany tena hatrany.
Fahatsapa-tenan’ny olo-tsotra mihitsy angaha vao mety hisy fiovana amin’ny resaka lalàna aty amin’ny tany an-dalam-pandrosoana.
24 mai 2007 à 20:37
>Fahatsapa-tenan’ny olo-tsotra mihitsy angaha vao mety hisy fiovana amin’ny resaka lalàna aty
“Ento manoloana ny mpitsara ry zareo, na avelao izy hody any an-tranony” [Amenez-les devant les juges, ou laissez-les partir] hoy ny Ambasadaoro James McGee tamin’ny mpianatra teny Ambohitsaina omaly raha niresaka ny fahatarana ara-pitsarana misy eto an-toerana.
>tsy ny fitsarana any amin’ireo firenena notononinao ireo mihitsy no tsy matotra
Marika fahamatorana amiko ny ahafahan’ny fahefam-pitsarana Soisa mandini-tena amin’izay mety lesoka misy, tsy henoko mihintsy ny feon-dRamatoa Lala Henriette Ratsiharovola ministry ny fitsarana Malagasy. Tsy ny resaka fitaratra mainty [vitre fumée] mihintsy no loha-laharam-pahamehana amin’ireo lalàna tokony avaozina amiko 😉
1 juin 2007 à 22:55
Fivoaram-baovao : Halavain’ny governemanata Soisa ny fifehezana ireo volaben’i ‘Bébé Doc’ >> « Tamin’ny Alarobia 30 May lasa teo dia neken’ny “Tribunal de première instance” eto Genève ny fangataham- pipehezana izay napetraky ny teratany Haisiana roa mikasika ny vola napetrak’i Jean-Claude Duvalier taty Soisa » [Mercredi dernier, le Tribunal de première instance de Genève avait accepté une requête en séquestre d’un compte de Jean-Claude Duvalier déposée par deux ressortissants haïtiens] swissinfo.org – zoma 1 Jona 2007.
9 juin 2007 à 14:29
Fivoaram-baovao : Nandefa taratasy fangatahana fandraisan’andraikitry ny fanjakana Soisa ny ONG maro momba ny raharaha mikasika ireo mpitondra aharihary ara-politika na PEP [Personnes Exposées Politiquement] mba « tsy hojerevan’izao tontolo izao toy ny firenena manampy amin’ny tsy fanarakarahana ireo mpitondra jadona i Soisa. » Azonareo vakiana any amin’ny blaogin’i Chantal Cutajar ilay taratasy mitondra ny lohateny hoe « Impunité et récompense de fait pour les Personnes Exposées Politiquement [PEP] – ledroitpourlajustice.blogspirit.com – 09.06.2007 >> »
← 07|05|21-25 – Fiangonana hoan’ny rano any Afrika [Entebbe, UG]
Samy manana ny toerany →